फुटबललाई ‘ब्युटिफुल गेम’ भनेर नाम राख्ने अरू कोही होइन, ब्राजिली पेले थिए । उनलाई लाग्थ्यो, फुटबल आफैंमा सुन्दर छ । यो उनको अनुभव हो । फेरि अरूले पनि फुटबललाई ‘ब्युटिफुल गेम’ भन्छन्, किनभने पेलेको ब्राजिलले पस्कने फुटबल पनि त सुन्दर हुने गर्छ । भनिन्छ, युरोपेलीहरू दिमागले फुटबल खेल्छन्, ब्राजिलले मनले ।
इन्स्टाग्रामले आफ्नो नयाँ अपडेटमा एउटा नयाँ फिचर थपेको छ । यो फिचरले प्रयोगकर्ताले आफू ट्याग भएको स्टोरिजलाई आफ्नो प्रोफाइलमा रि–पोस्ट गर्ने सुविधा दिनेछ । प्रयोगकर्ताले आफूलाई ट्याग नभएको अरूको स्टोरिज फेरि पोस्ट भने गर्न पाउने छैनन् ।
ग्यालेक्सी एस नाइन अगाडि
अप्रिल महिनामा सामसुङको ग्यालेक्सी एस नाइन एप्पलको आइफोन टेनलाई उछिन्दै बजारमा नम्बर एक भयो । मार्केट पल्सले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार अप्रिलमा बिक्रीका हिसाबले सामसुङको ग्यालेक्सी एस नाइन प्लस, एस नाइनपछि बल्ल आइफोन टेन छ । तर, सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने स्मार्टफोन सूचीमा एप्पलको दबदबा कायमै छ ।
याहु म्यासेन्जर बन्द हुने
फेसबुक, भाइबर र ह्वाट्सएप आउनुअघि सबैभन्दा चर्चित रहेको याहु म्यासेन्जर बन्द हुने भएको छ । याहु म्यासेन्जर १७ जुनदेखि बन्द हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
फिफा विश्वकप फुटबलको २१ औं संस्करण बिहीबार रूसमा सुरू भयो । रूसका ११ सहरका १२ रंगशालामा एक महिना सञ्चालन हुने विश्वकपमा ३२ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यसपालिको विश्वकपका केही रोचक पक्ष :
पछिल्ला वर्षमा स्मार्टफोनप्रति मानिसको आशक्ति यति बढेको छ कि जसले बनाएको हो, उसैले भन्नुपरेको छ– अब कम चलाऊ ।पछिल्ला केही सातायता यस्तै घटनाले चर्चा पाएका छन् । जस्तो कि अघिल्लो महिना गुगलले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ भर्सन एन्ड्रोइनपीको घोषणा गर्दै प्रयोगकर्तालाई स्मार्टफोन ठिक्क मात्रै चलाउन प्रोत्साहित गर्ने फिचरको घोषणा गर्‍यो ।
सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) बन्ने लक्ष्य लिएर सिक्किमबाट दिल्ली पुगेका थिए । कलेज पढ्दै फुर्सदमा घुम्दा फेसन उद्योग देखे, जुन उनको सोचाइभन्दा विल्कुलै फरक थियो । कहिलेकाहीँ हिँड्दाहिँड्दै गन्तव्य फेरिन्छ र यस्तै भयो तेन्जिङ छेतेन भुटियाका लागि पनि ।
अनिलको थिएटर यात्रा
तेस्रोलिंगीहरूले समाजमा बेहोरेका पीडा देखाइन्छ ‘जिउँदो आकाश’ मा । यो नाटकमा युवा रंगकर्मी अनिल सुब्बाको अभिनयको सबैले प्रशंसा गरेका छन् । त्यसैबाट अनिललेचर्चा बटुले । केही अघि थिएटर ओलम्पिकमा दिल्ली र गुवाहटीमासमेत नाटक प्रदर्शन गरिसकेका अनिल अहिले मोफसलमा व्यस्त छन् ।
सर्वकालीन महान् !
विश्व फुटबलमा वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई दिइने अवार्ड हो– बेलन डि’अर । फ्रान्स म्यागजिनले सन् १९५६ मा सुरु गरेको यो अवार्ड लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सर्वाधिक ५–५ पल्ट जितेका छन् । उनीहरूको यो सफलता अरूको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो किनभने अन्य खेलाडीले तीनपल्टभन्दा बढी बेलन डि’अर जितेका छैनन् ।
विश्वकप खेल्नु आफैंमा ठूलो अनुभव हो । यस स्तरमा दिग्गज खेलाडीले आफ्नो छाप बसाउन चुकेका धेरै उदाहरण छन् ।
आफूलाई मनपरेको टिम, अझ भनौं, आफूले लामो समयदेखि समर्थन गरिरहेको टिम नै छैन भने विश्वकप किन हेर्ने ? फुटबलका केही खास समर्थकले यस्तो पनि भन्न सक्छन् । प्रत्येक विश्वकप फुटबलमा कुनै न कुनै ठूलो टिम अनुपस्थित रहने गरेको छ । विश्वकपको अन्तिम चरण खेल्नु जति गाह्रो छ, त्यो भन्दा गाह्रो विश्वकपमा छनोट हुनु भनिन्छ । केही ठूला टिम यही छनोटमै अड्किने गर्छन् । जस्तो, यसपल्ट इटाली नराम्रोसँग छनोटमै फस्यो ।
टिएन्टो उरूग्वे १९३०, फेडरेल १०२ इटाली १९३४, अलेन फ्रान्स १९३८...
कृषि विकास आयोजना, नक्टाझिज, धनुषा । ढल्केबरबाट ६ किलोमिटर दक्षिणतर्फ र जनकपुर पुग्नु १८ किलोमिटर यतै रहेको यस स्थानमा भर्खर आएको १४ इन्चको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टेलिभिजनले उज्यालोको किरण छरेको थियो । यसको विशेषता के थियो भने झन्डै एक सय सरकारी क्वार्टर रहेको त्यस क्षेत्रमा भित्रिएको त्यो पहिलो टेलिभिजन थियो ।
१. द ड्याम्ड युनाइटेड, सन् २००९ यो खेलकुदको बायोग्राफिकल फिल्म हो, जसमा बेलायती फुटबल व्यवस्थापक ब्रायन क्लाफको कथा समेटिएको छ । सन् १९७४ मा लिड्स युनाइटेड क्लबमा आबद्ध हुँदा उनले के–के गरे भन्नेमा फिल्म केन्द्रित छ ।
कीर्तिपुरका किशोर आदित्यदेव जोशी ब्राजिली टोलीका समर्थक हुन् । उनी विश्वकपमा ब्राजिलको खेल हेर्न आतुर छन् । अझ भनौं, नेयमरको प्रदर्शनलाई व्यग्र छन् । त्यसैले त आफूलाई ब्राजिल अनि नेयमरको खाँटी समर्थकको पहिचान दिन जर्सीको खोजीमा भौंतारिएका आदित्य परिवारसहित त्रिपुरेश्वरको डब्लूटीसीस्थित स्काई स्पोर्ट्स हाउसमा भेटिए ।
विश्वकप २०१८ का रंगशाला
कजान एरेनादर्शक क्षमता : ४५,३७९स्थापना : २०१३इंग्ल्यान्डको वेम्ली र इमिरेट्स स्टेडियमको आर्किटेक्टले डिजाइन गरेको यो रंगशालाको मुख्य आकर्षक भनेको मैदानको छेउमा रहेको एचडी स्क्रिन हो ।
विश्वकपमा सधैं दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत हुने अर्जेन्टिनाको खेल हेर्न उत्साहित हुन्छु । छोरी र मैले जर्सी किन्ने निधो गरिसक्यौं । यसपालि लियोनल मेसीको अन्तिम विश्वकप हो क्या रे । त्यसैले पनि बढी चासो लागिरहेको छ ।
विश्वकप यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ उत्कृष्टता नदेखाएसम्म कोही विश्वको महान् खेलाडी बन्न सक्दैनन् । धेरै हदसम्म हालका उत्कृष्ट मानिएका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेसीको हकमा पनि त्यही लागू भइरहेको छ ।
गोल्डेन बुट विजेता
१९३० गुइलेर्मो स्टाबिल (अर्जेन्टिना)– ८ गोल१९३४ ओल्डरिच नेजेडली (चेकोस्लोभाकिया) – ५ गोल१९३८ लिओनिडास (ब्राजिल)– ७ गोल१९५० एडेमिर (ब्राजिल) – ८ गोल१९५४ सान्डोर कोकसिस (हंगेरी) ...
सन् १९९८ को विश्वकपताका म निकै सानो थिएँ । घर परिवारका अरू सबै त्यही विश्वकपमा झुमिँदा म भने सुतिहाल्थें । मैले पहिलोपल्ट राम्रोसँग हेरेको विश्वकप त्यसको चार वर्षपछिको थियो, सन् २००२ को । त्यति बेला दक्षिण कोरिया र जापानले विश्वकप आयोजना गरेको थियो, पहिलोपल्ट एसियामा विश्वकप हुँदै थियो । त्यति बेला हामी एन्फा एकेडेमीमा छनोट भइसकेका थियौं र हामी बुङमती खोकनाको ज्ञानोदय होस्टलमा थियौं ।
फुटबलको जन्म बेलायतमा शताब्दीअघि भएपनि अहिले जुन फुटबल देखेका छौं, जानेका छौं, यो रग्बी फुटबल र फुटबल आ–आफ्नै बाटोतर्फ अगाडि बढ्दा आइपुगेको हो । बेलायती फुटबल संघ विश्वकै पहिलो फुटबल संगठन हो । त्यसपछि बीसौं शताब्दीतिर आइपुगेर फेडरेसन इन्टरनेसनल डे फुटबल एसोसिएसन (फिफा) बन्यो ।
विशाल श्रेष्ठमनपर्ने टोली : ब्राजिलमनपर्ने खेलाडी : इकार कासियास (स्पेन)सम्भावित विजेता : ब्राजिल
इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट ५ खेल
उरुग्वे २–१ ब्राजिल१९५०विश्वकप १९५० को संरचना फरक थियो । चार समूहका विजेताहरूले अर्को चरणमा समूहमै रहेर खेलेका थिए र यसैबाट विजेताको चयन गरिएको थियो । उक्त फाइनल चरणमा ब्राजिलले स्वीडेनलाई ७–१ र स्पेनलाई ६–१ ले हराएको थियो । त्यसैले उसलाई विश्वकप च्याम्पियन बन्न अन्तिम खेलमा बराबरी नतिजा पनि पर्याप्त हुने थियो । धेरै पत्रिकाले पनि अबको च्याम्पियन ब्राजिल भनेर खबर नै प्रकाशित गरे ।
गोल्डेन बल विजेता
२०१४ लियोनल मेसी, अर्जेन्टिना ...
जसले तहल्का मच्चाउन सक्छन्
विश्वभरका उत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल टोली आउँदो साताबाट रुसमा हुने फुटबल महोत्सवमा आमनेसामने हुँदै छन् । उपाधि भिडन्तमा स्टार नामहरू सम्मिलित ठूला टोलीको दाबेदारी भए पनि साना टोली दाबेदार टोलीका लागि बाधक बन्न सक्छन् । नाम चलेका स्टार नहँ‘दा पनि केही टोलीले अनपेक्षित नतिजा ल्याउने सम्भावना देखिन्छ ।
सुखद बिदाइको प्रतीक्षा
रुसको ११ सहरमा सुरू हुने विश्वकप २०१८ ले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पृथक् पहिचान बनाएका केही विश्वस्तरीय खेलाडीलाई बिदाइ गर्नेछ । बढ्दो उमेर र युवा पुस्तासँगको चर्को प्रतिस्पर्धाले गर्दा यी खेलाडीले रूसमै आफ्नो विश्वकप यात्रा टुंग्याउँदै छन् ।
बलिया ब्राजिल र फ्रान्स
गत सिजनको सुरुमै ब्राजिलका स्ट्राइकर नेयमर पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) जाने ठूलो चर्चा चलिरहेको थियो । नचलोस् पनि कसरी, यसले विश्व फुटबलको सरुवा बजारमा ठूलो उथलपुथल ल्याउँदै थियो । अन्तत: चर्चाअनुरूप नै नेयमर विश्व कीर्तिमानी रकममा फ्रान्सको राजधानीको क्लबमा लागे ।
लियोनल मेसीदेश : अर्जेन्टिना उमेर : ३०पोजिसन : फरवार्ड
पुटिन र फुटबल राजनीति
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन खेल भनेपछि हुरुक्कै हुने पाराका छन् । कम्तीमा उनले यस्तै छवि बनाएका छन् । जति बेला विश्वकप २०१८ को उद्घाटन खेलमा रुस लुजनिकी स्टेडियममा साउदी अरेबियाविरुद्ध उत्रने छ, त्यहाँ पुटिन पक्कै हुनेछन् ।